Iko kukanganisa kwekudzivisa paunenge uchigadzira eCommerce | ECommerce nhau
Kutengeswa kwepasi rose kwe eCommerce inokura neinopfuura 13% muna 2016 zvichienzaniswa negore rino, uye kuti kune vanopfuura mabhiriyoni 1.300 vatengi vepamhepo kutenderera pasirese. Dhata senge iyi inomutsa kufarira kwevanhu vazhinji mu electronic commerce. Kunze kwezvo, iyo Kuuya kweEuropean Inofungidzirwa kuti makumi maviri muzana yevagari veEU-20 vatotenga online pamasaiti mune imwe nyika isiri iyo yavanogara.
Asi kuti iyo online sales Kuwedzera hazvireve kuti zvitoro zvese zvepamhepo zvinotengesa zvakanyanya, ndoda kuvimbisa kubudirira kwezvitoro zvitsva zvemadhijitari. Naizvozvo, kunyangwe iwe uchitova neCommerce kana kana iwe uri kufunga kutanga imwe, pane zvimwe zvikanganiso izvo zvaunofanirwa kudzivirira kana iwe uchida kutora chikamu mukugovera keke.
Kubatsira makambani uye vezvemabhizimusi kutora mukana wemabhizinesi mikana inopihwa neCommerce, Acens, anotungamira mupi weCloud Hosting, Kubata, Dzimba uye
Telecommunications mhinduro dzemusika webhizinesi, rakaburitsa mu infographics izvo gumi neumwe zvakakosha zvakakosha zvekutarisa kana seta chitoro chaicho.
Zvinoenderana neazvino Statista Dhijitari Msika Outlook, mobile commerce ichaverengera inosvika 15,6% yehuwandu hwee-commerce kutengesa kuSpain gore rino. Pakazara, maSpanish anoshandisa avhareji e770 euros muzvitoro zvepamhepo, neSpain iri nyika yechinomwe pasi rose inoshandisa zvakanyanya mutengi wepamhepo.
«Kazhinji, vashandisi vanokoshesa zvikuru zvese zvine chekuita neruzivo pachena, kugona mukuita kwekutenga, kuchengetedzeka kwekutengeserana pamwe nekugadziriswa kwe data rako uye, kazhinji, zvese zvinoreva chiitiko chekutenga kubva kumafoni nhare, a chakakosha mamiriro sezvo zvichitarisirwa kuti kusvika 2019 kusvika pa45% yeese e-commerce ichaitwa kubva kune nharembozha », tsanangura Julio Lopez-Oliva, Chigadzirwa Maneja weAces Online Zvitoro.
11 zvikanganiso iwe zvausingakwanise kuita muCommerce
Kubva pane ongororo yezviuru zvepamhepo zvitoro zvakagadzirwa neAcens eCommerce mhinduro, kambani inotangisa zvimwe matipi ekudzivirira zvikanganiso kana uchigadzira chaiyo chitoro:
Viga mari yekutumira, sezvo mushandisi achifarira kuziva mutengo wekutenga kwavo uye zvinowanzove chimwe chezvikonzero zvishanu zvakajairika zvekusiya ngoro yekutengera.
Govera iwo iwo mitengo yakafanana neyemuzvitoro zvepanyama. Zvinoenderana neongororo yakaitwa neMobile Commerce Mazuva ese, 96% yevashandisi vari kutsvaga imwe mhando yemaponi kana kuderedzwa kuti vatenge online.
Ipa zvishoma zvigadzirwa ruzivo. Ruzivo rwakawanda uye ruzivo rwakapihwa nezve chigadzirwa zviri nani. Wedzera hunyanzvi machira, zviyero, mavara, kuwanikwa, nezvimwe. inosvitsa kuvimba kwakanyanya uye inokurudzira kutenga pamberi pemawebhusaiti pausingazive chaizvo kana chigadzirwa chaunokumbira ndicho chaunoda.
Kumanikidza kunyoresa. Zvese zvekumanikidza kutenga uye zvekufunga zvine hungwaru, vashandisi vanoda kuisa maodha avo nekukurumidza. Kutenda kunyoreswa kuburikidza nesocial network, zviri nyore kuziva mushandisi uye kutora mukana weiko kunyoreswa kugovana yavo yekutenga ruzivo pane yavo mbiri.
Kusina yekutsvaga injini inoshanda. Sezvo pawebhu, injini yekutsvaga chishandiso chakakosha kubatsira mushandisi kuwana izvo zvavari kutsvaga nekukurumidza. Kukanganisa kunoshandura kusiiwa kwewebhu.
Usape runhare. Vatengi veDhijitari vanoda kuziva kwavari kutenga uye vane rugare rwepfungwa uye kuswedera kwekugona kubata chitoro nguva dzese. Iko kusanganisirwa kwemasevhisi senge sevhisi yebasa machats anobatsira kuchengetedza mushandisi uye kwete kurasikirwa nekutengesa kunogoneka.
Kanganwa nezve SEO. Izvi zvinofanirwa kutariswa pamapeji edu ese, nekuti sekureva kweTrueship inosvika ku5% yeiyo yese e-commerce yekutengesa inobva kumasocial network.
Usasanganise mifananidzo yemhando yepamusoro. Pasina kudzora kurodha kumhanya kwewebhu, kusanganisira zvemhando yepamusoro mifananidzo yezvigadzirwa inovandudza ruzivo rwekutenga kune vashandisi.
Kuregeredza data encryption. Kuchengetedzwa kwekutengeserana uye kuvanzika kwedata izvi zviri zviviri zvezvinonetsa zvikuru zvevashandisi pavanotenga online. Iva netampu yekuvimba yekutenga pamwe nesarudzo dzakasiyana siyana dzekubhadhara zvinogona kureva kuwedzera kutengesa kusvika ku25%.
Sanganisira matanho akawandisa mukutenga. Inofungidzirwa kuti mumwe muvashandisi vashanu vanosiya ngoro yekutengera kana vachifanira kupfuura nezvikamu zvakawandisa kuti vatenge chigadzirwa. Munguva dzekukurumidza uye kufamba, mashoma mabhatani anoreva zvishoma zvinokanganisa uye zvimwe kutengesa.
Ita kuti kutenga kuome pane nharembozha. Sekureva kwa Statista, mumwe muvashanu vashandisi vefoni mbozhanhare vakatenga online gore rino, saka kusave nechitoro chakashandisirwa nharembozha zvinoreva kurasikirwa nevatengi vazhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Iko kukanganisa kwekudzivisa paunenge uchigadzira eCommerce